लक्षण र उपचार: मानिसहरूलाई Leptospirosis
Leptospirosis - zoonotic विकृति ज्वरो र साथ आय जो haemorrhagic सिंड्रोम, कलेजो र मृगौलाहरूमा, स्नायु प्रणाली।
कारणहरू र रोग को घटना को अवस्था
रोग Leptospira कारण छ। यो सर्पिल सूक्ष्मजीवहरु spores, वा दाना फारम भन्ने छैन, र निष्क्रिय छन्। तिनीहरूले ऊतक हौं र परजीवी आक्रमण गर्न सक्छन् नसाहरू, मांसपेशीमा र रगत, साथै कलेजो र मिर्गौला। साथै, तिनीहरूले lipids, polysaccharides र polypeptides बनेको छ जो endotoxin, समावेश। यी यौगिकों pyrogenic र necrotic गुण प्रदर्शनी। त्यहाँ मानिसहरूलाई मा leptospirosis हुँदा, रोग को लक्षण यी सुविधाहरू द्वारा निर्धारित छन्।
संक्रमण स्रोत - जनावर (मुसा, कुकुर, सरीसृप र चरा)। Leptospira संग दूषित छ जो एक व्यक्ति पानी संग सम्पर्क मा संक्रमित। साथै, पिन एक खाना वा प्रसारण को बाटो हुन सक्छ। अरूलाई एक बिरामी व्यक्ति खतरनाक छैन।
यो leptospirosis गर्न संवेदनशीलता पर्याप्त उच्च छ भन्ने उल्लेख गर्नुपर्छ। रोग मानिसहरूलाई प्रायजसो छ। स्थायी प्रतिरक्षा गठन leptospirosis पीडित पछि।
मानिसहरूलाई मा Leptospirosis: लक्षण
रोग को प्रारम्भिक अवधि सात दिन सम्म रहन्छ। तेज सुरु गर्नुहोस्। अतिताप 40 ° सी, ठंड लाग्न, टाउको दुखाइ, र वाकवाकी र palpitation गर्न हुन्छ। गंभीर प्रवाह विशेषता कम ग्रेड ज्वरो मा। त्यहाँ मानिसहरूलाई मा leptospirosis हुँदा लक्षण मांसपेशिहरु मा गंभीर दुखाइ समावेश गर्नुहोस्। रोग को पूर्वानुमान worsens जो मृगौला क्षति, गर्न प्रमुख मांसपेशी फाइबर को Necrosis।
अनुहार र आँखा को leptospirosis पत्ता निस्तब्धता को प्रारम्भिक चरणमा, नशा को विशिष्ट लक्षण हो। भविष्यमा, मृगौला क्षति, कलेजो, मुटु र फोक्सोमा को लक्षण विकास। उल्लेखनीय पीलिया र hemorrhagic सिंड्रोम, विभिन्न अङ्गहरू वा विशिष्ट दाना मा आक्रान्त, hemoptysis, सकल hematuria प्रकट जो।
मानिसहरूलाई मा leptospirosis संग निदान गर्दा लक्षण 4-6 सप्ताह विद्यमान। कि पछि, वहाँ एक लामो asthenovegetative सिंड्रोम र चिन्ह लगाइएको कमजोरी हो। आँखा र स्नायु प्रणाली को हार समाप्त हुन्छ जो leptospirosis को कमजोरीको वशमा पऱ्यौं, को अवस्थामा को 20-60% मा।
निदान र उपचार
प्रारम्भिक चरणमा त्यहाँ leukocytosis, aneozinofiliya, lymphopenia र वृद्धि ESR छ। गंभीर प्रकारका मा, रातो रक्त र platelets को हेमोग्लोबिन रकम कम। को मूत्र गठन तत्व भनेर लगभग सबै विरामीहरु अवलोकन देखिन्छन्। निदान मूल्य मांसपेशी क्षति संकेत जो रगत सीरम, मा CPK को एक महान स्तर छ।
के leptospirosis लागि विशेष परीक्षण मदत गर्नेछ? बिरामी यो विकृति हो व्यक्तिले Leptospira को प्रत्यक्ष संस्कृति संग microagglutination प्रतिक्रिया व्यक्त प्रकट गर्छ। यसलाई नकारात्मक प्रतिक्रिया सधैं सानो क्रेडिट मा उत्पादन एंटीबडी को भारी प्रवाह देखि, यो रोग बाहिर शासन गर्दैन उल्लेख गर्नुपर्छ।
leptospirosis, दूषित Leptospira को मानव उपचार संग निदान गर्दा आवश्यक एन्टिबायोटिक लिने समावेश छ। सबैभन्दा प्रभावकारी penicillins। लागूऔषधको यो समूह एलर्जी हुन्छ भने, त्यसपछि tetracyclines प्रबन्ध। को उपचार पनि दाता immunoglobulin र भिटामिन प्रयोग गरिन्छ। लागूपदार्थ "Lasix" वा "Mannitol" को प्रयोग गरेर कलेजो विफलता को उपस्थिति मा। आवश्यक छ भने, एक hemodialysis।
पेट क्षेत्रमा Girdle दुखाइ: कारणहरू, लक्षण र उपचार
बिहान खोकी बच्चा: कारणहरू र उपचार
Tonsillolith: हटाउन वा व्यवहार?
नतिजा र उपचार: हस्तमैथुन के हो
व्यावहारिक सुझावहरू लागि नक्काशी, वा सुन्दर फल कटौती कसरी
एक बच्चा मा कारण र निमोनिया लक्षण
खलीफा - यो के हो? अरब खलीफा, यसको गठन र क्षय। को खलीफा को इतिहास
Snowball पुतली - मीठा कपडा आकर्षण
कार्निस hens: नस्ल विवरण
गर्भावस्था को समयमा दोस्रो अल्ट्रासाउंड
Prams Maclaren: खुसी आमाबाबु खुसी बच्चा